Al-shabaab oo 15-qof dishay weerar kale oo ay ku qaadday degmada Mpeketoni.
Ugu yaraan 15-qof ayaa lagu dilay weerar kale oo ay Al-shabaab xalay ku qaadday deegaanno ka tirsan tuulada Mapenya oo ka tirsan Mpeketoni oo habeen hore uu ka dhacay weerar ay ku dhinteen 48-qof.
Wasiirka arrimaha gudaha Kenya, Joseph Ole Lenku ayaa sheegay inay kooxaha hubeysan gubeen qalab ay lahayd shirkadda isgaarsiinta Safaricom ka hor inta aysan dilin dadka.
Ole Lenku ayaa hadalkiisa ku daray in weerarkan uu ahaa mid daba-socday kii ka dhacay isla deegaankaas habeen hore, isagoo xusay in kooxaha weerarka soo qaaday ay ahaayeen kuwo wax walba ogsoon. “Kooxaha intii aysan weerarka qaadin waxay qalqal-geliyeen isgaarsiinta oo si aysan dadku u bixin digniino la xiriira weerarka,” ayuu wasiirku hadalkiisa ku daray.
Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay in dagaalkan uu yahay mid baahsan, ayna ku guubeen kooxahan gaadiid iyo dhismayaal ku yaalla tuulada Mapenya, isagoo aan sheegin kooxaha weerarka geystay halka ay aadeen.
Wasiirka ayaa intaas ku daray in ciidamada amniga Kenya ay ka hortageen inay kooxahan mar kale dilal baahsan geystaan, isagoo xusay inay dileen 15-qof oo keliya, kuwaasoo uusaan sheegin waxay ahaayeen shacab iyo askar.
Al-shabaab ayaa horay u sheegatay mas’uuliyadda weerarkii lagu dilay 48-ka qof ee ka dhacay degmada Mpeketoni oo ku dhow degmada Laamu, iyagoo sheegay in weerarkaas uu ahaa mid ay aargudayeen wadaaddo lagu dilay Mombasa. “Waxaan fulinnay weerar kale oo aan xalay ku qaadnay deegaannada Kenya oo aan ku dilnay 20-qof, intooda badanna waxay ahaayeen askar Kenyan iyo kuwo kale oo ilaalo hayay.
Ciidamadeennuna waxay mareen deegaanno dhowr ah oo ay ka raadinayeen askarta Kenya,” ayuu yiri afhayeenka howlgallada Al-shabaab Sheekh C/casiis Abuu-Muscab. Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in weerarradan ay sababayaan in saraakiisha Kenya ee Lamu jooga la bedelo, halkaasna la geyn doono saraakiilcusub si ay wax uga qabtaan.
Magaalooyinkan dagaalladu ka dhaceen ayaa waxaa tagay maanta saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha booliiska Kenya, David Kimaiyo iyo labadiisa ku xigeen ee kala ah, Grace Kaindi iyo Samuel Arachi, si ay ugu kuurgalaan xaaladaha ka jira iyo dilalkii dhacay.